गोल्छा भर्सेस ढकाल! « AayoMail
गोल्छा भर्सेस ढकाल!
तीन वर्षअघि व्यवसायीहरू शेखर गोल्छा र किशोरकुमार प्रधान ठीकविपरीत ध्रुवमा विभाजित थिए।
र, दुवैजना उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भिडे। निर्वाचनबाट गोल्छा २०७३ चैत २९ गते वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी हुँदा प्रधानले माला पहिर्‌याइदिए।
त्यतिखेर गोल्छा प्यानलका चन्द्रप्रसाद ढकाल एसोसिएट उपाध्यक्षमा निर्विरोध भइसकेका थिए।
महासंघको यो कार्यसमितिको तीन वर्ष नाघ्दा अहिले प्रधान र ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि आमुनेसामुने छन्। र, स्वतः आगामी अध्यक्ष रहेका गोल्छाले प्रधानलाई दह्रो साथ दिएका छन्।
गोल्छा र ढकालबीचको तिक्तता थाहा पाउनुअघि प्रधानले कसरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भिड्ने मौका पाउँदैछन् भनेर जानौं।
प्रधान अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनाव लड्न पाउँदैनथे।
त्यतिबेला प्रधान प्यानलका प्रमोद श्रेष्ठ उद्योग वाणिज्य समूहतर्फको उपाध्यक्षमा विजयी बनेका थिए।
तर, २०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा श्रेष्ठ तत्कालीन एमालेबाट म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लडे। उनी मेयरमा विजयी हुन नसक्दा यता महासंघको उपाध्यक्ष पद उनको हातबाट फुत्किसकेको थियो।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गोल्छासँग पराजय भोगेका प्रधान उनै श्रेष्ठका कारण उपाध्यक्षमा लड्ने मौका पाए। रिक्त पदका लागि चुनावमा निरक केसी र प्रकाश साउदलाई हराएर उपाध्यक्षको कुर्सीमा बसेका प्रधान अबको तीन वर्षपछिको अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्।
महासंघको चुनावी साधारणसभा आगामी साउन २६ देखि २७ का लागि तय भएको छ।
विधानअनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी ढकालले प्यानल नै घोषणा गरिसकेका छन्। प्रधानले प्यानलै त घोषणा गरिसकेका छैनन् तर मंगलबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर ढकाल प्यानललाई जवाफ दिइसकेका छन्।
रोचक पक्ष चाहिँ अबको यो चुनावको केन्द्रमा भने गोल्छा छन्।
अहिले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हाँकिरहेका गोल्छा र वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी ढकालबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेकै छ। उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा पनि ‘गोल्छा भर्सेस ढकाल’ भन्ने चर्चा हुन थालिसकेको छ।
हिजो मंगलबार प्यानल घोषणा कार्यक्रममा गोल्छाको नाम लिँदै ढकालले भनेका थिए– ‘हामीले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव किन पारित गरेका थियौं? त्यो मर्मलाई अहिले कसले मार्दैछ? त्यो केका लागि?’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने गरी विधान संशोधनको विषय उठ्दा आफू गोल्छाको पक्षमा उभिएको प्रसंग उठाएका हुन् ढकालले।
२०७३ सालमा भवानी राणा महासंघ अध्यक्ष बन्नुअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान थिएन।
तर, महासंघले त्यही वर्ष मंसिर ४ मा विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था कायम गर्‌यो। त्यही प्रावधानअनुसार तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति मुरारका राणालाई कुर्सी सुम्पिएर घर फर्किएका थिए। नत्र, अध्यक्षका लागि चुनाव हुन्थ्यो र मुरारका विजयीलाई अध्यक्षको कुर्सी हस्तान्तरण गरेर घर जान्थे।
तर, डेढ वर्षमै विधान संशोधन गर्नुपर्ने माग उठ्यो।
तीमध्येका एक थिए– महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका विशिष्ट सदस्य चण्डीराज ढकाल। हुन त त्यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्काे कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था कायम गराउनेमध्येमा उनी पनि एक थिए।
महासंघमा फेरि विधान संशोधनको आवाज उठिरहँदा गोल्छा वरिष्ठ उपाध्यक्षको कुर्सीमा पुगिसकेका थिए। र, अध्यक्ष बन्ने गोल्छा परिवारको सपना साकार हुने क्रम चलिरहेको थियो।
तर, गोल्छा त्यतिखेर झस्किए जब चण्डीराजकै संयोजकत्वमा विधान परिमार्जनका लागि संशोधन समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था आयोे।
अनि, समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्काे कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने विधान फेरेर पुरानै व्यवस्था कायम गराउने तयारी गर्‌यो। त्यसका लागि २०७६ कात्तिक २९ गते विशेष साधारणसभा पनि बोलाइयो।
तर, महासंघ फुटको संघारमा पुग्ने अवस्था आइलागेपछि पुरानै प्रणालीलाई अंगिकार गर्ने प्रस्ताव महासंघको कार्यकारिणी समितिमा पुग्यो। यो दुर्घटना टार्न निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले विशेष पहल गरे।
ढकालले प्रश्न सोधेका छन्– ‘केही महिनाअघि नेतृत्वमा बसेका अधिकांश साथीहरूले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्दा त्यो प्रावधान हटाउनु हुँदैन भनेर कसले लबिङ गरेको थियो? भविष्यमा हामीले जे गरौंला–गरौंला तर अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखरजीले नै नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेर मैले ठूलै मेहनत नगरेको भए आज के हुन्थ्यो?’
तर, कुरो यतिमै रोकिएन। ढकालले आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न पूर्वअध्यक्ष चण्डीराजको साथ खोजेपछि गोल्छा बिच्किन पुगे।
ढकालले चण्डीराजको साथ खोज्नु पनि स्वाभाविक मानिन्छ। किनकि, ‘चुनाव जित्नकै लागि लडिन्छ’ भन्ने आहान छ।
ढकालले पनि यही उपाय अपनाए। महासंघमा जिल्लागत र वस्तुगततर्फका भोट चण्डीराजका बढी छन् भन्ने चर्चा महासंघमै छ।
महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि प्राप्त हुने मतलाई तीन भागमा विभाजन गरिन्छ। जसमा जिल्ला, नगरको मतभार ५० प्रतिशत हुन्छ भने एसोसिएटको मतभार ३० प्रतिशत हुँदा वस्तुगतको मतभार २० प्रतिशत हुन्छ।
गोल्छाले भने यो कदमलाई ‘आफू अध्यक्ष बन्न नदिने खेलमा लागेकाहरूको सहयोग लिएको’ रूपमा अथ्र्याएका छन्।
मंगलबारै ललितपुरमा प्रधान समूहले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चण्डीराज समूहलाई लक्षित गरी गोल्छाले भने– ‘मलाई तीन वर्षसम्म निरन्तर पीडा दिइयो। मेराविरुद्धमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विधान संशोधन गरेर तत्काल शेखर गोल्छालाई हटाउनुपर्छ भन्ने जुन साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो साथीहरूले तिमी ठिक छौ, मसँग उभिएका छन्, उनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।’
कसको पल्ला भारी?
व्यवसायी चन्द्र ढकालले गत वर्ष फागुनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दा सौरभ ज्योती, दिनेश श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठको साथ थियो।
कोरोना भाइरस महामारी नहुँदो हो त महासंघको चुनाव त्यही बेला चैतमै भइसक्थ्यो। तर, ‘लकडाउन’ कारण अब साउन २६ देखि २७ गतेलाई सर्दा ती तीन व्यवसायी भने ढकालको पक्षबाट धेरै टाढा पुगिसकेका छन्।
अब प्रधानको प्यानलबाट वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ, एसोसिएट उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योती र जिल्ला–नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ मैदानमा उत्रिँदैछन्।
ज्योती तिनै हुन्, जसले तीन वर्षअघिको चुनावमा ढकाललाई एसोसिएट उपाध्यक्ष बनाउन आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए।
ढकालको प्यानलबाट जिल्ला–नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाई भिड्नेछन्।
ढकाल प्यानललाई पूर्वअध्यक्ष चण्डीराजसहितको साथ छ। यो प्यानललाई जिल्लागत र वस्तुगतको भोट बढी आउने आँकलन गरिएको छ।
प्रधान प्यानलको पत्रकार सम्मेलनमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्वअध्यक्षहरू पशुपति मुरारका, विनोदबहादुर श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ र कुशकुमार जोशी उपस्थित थिए।
तीन वर्षअघि गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन मैदानमा उत्रिएकी वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा यो चुनावमा खासै खुलेकी छैनन्।
महासंघमा कोषाध्यक्ष भने कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट चुनिन्छन्।